Ogaden News Agency (ONA) – Allaha U Naxariistu Abwaan Yusuf M. Sugaal (Yusuf Dheere), Wuxuu ahaa Halyey Taariikhda Galay
Qof walba meesha uu ku dhiman Ilaahay umbaa ogsoon, وما تدري نفس بأي أرض تموت : , waxaase hubaal ah inuu halyaygan marna is-odhan gaadhi ayaa kaa dul-boodi doona adigoo dhex maraya Jigjiga, isagoo dagaala badan lasoo galay ciidamada gumaysiga Itobiya intii u hdaxaysay 1976-1978.
Col. Yusuf Dheere AUN taariikh dheer ayuu ku leeyahay halganka ka socda Ogadenya, wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaradii ugu horeysay ee hubka qaaday dagaaladii 1977kii isagoo ka mid ahaa saraakiisha WSLF.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya siduu u dhintay halyaygan oon baadhitaan ku wadno, hasa ahaatee wararka aan ka helnay Ila-Wareedyo muhiim ah oo jooga magaalada Jigjiga ayaa sheegay in koox maxaysatada Hawaarinta (Liyuu police) oo hubaysan oo gaadhi nooca loo yaqaano hardtop wata ay si si ula kac ah ugu dhufteen baabuur ay wateen eng Cali baashe oo ah nin ganacsade ah oo iska shaqaysta oo miskiin ah. Gaadhiga waxaa kaloo saaraa;
1. eng Cali Baashe
2. Corneel Yuusuf Maxamed (Yuusuf dheere)
3. Garaad Xirsi Maxamed Dool
4. Shariif Bulbul.
Alle ha u naxariistee waxaa shalay abaara 8:00 galabnimo u geeriyooday shilka siday sheegeen Colonel Yuusuf Maxamed (yuusuf dheere) oo muddo yar un joogay magaalada isagoo kasoo tagay deegaanka uu ku noolyahay hadda oo ah Ingriiska, halka eng Cali Baashe, Garaad Xirsi Maxamed Dool iyo Shariif Bulbul ay dhaawac yihiin oo lagu dawaynayo isbitaalka wayn ee Karamardha.
Ilaa hadda lama garanayo sababta ka dambaysa ee nimankaa masaakiinta ah ay ugu dhufteen gaadhiga iyada oo xaalada magaalda Jigjiga. Waxaa loomalaynayaa madama ay Hawaarintu ay noqdeen dad aan sharciga qabanin inay iskala ogaynba in ay gaadhi wadaan iyo inkale marka ay magaalda dhexdeeda socdaan.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa qayb ka mid ah taariikhda halyaygan anagoo idin maqasheen doona gabayadiisii dhaxagalka ahaa qaarkood.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya Waxay Tacsi u dirayaan dhamaan umadda Somalida Ogadenya, Waxayna Ilaahay uga baryayaan inuu Janadiisa ku manaysto oo aanu dabamarinin halgankii uu lasoo galay gumaysiga.